Ukushona okuphakeme okuphezulu 99% i-alumina ceramic substrate China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Ceramic Substrate > Ukushona okuphakeme okuphezulu 99% i-alumina ceramic substrate
99% i-alumina ceramic substrate inesakhiwo esingcono kunama-95% alumina noma ezinye izingxenye eziphansi ze-alumina ceramic. Izindlela zokukhiqiza eziyinhloko zengu-99% ye-alumina ceramic substrate zibandakanya ukukhishwa kwe-tape eyomile. Singakwazi ukukhiqiza kusuka kumaminithi. ubukhulu obukhulu obukhulu ngobukhulu obuhlukile, kufaka phakathi 0.30 obukhulu, 0.38 obukhulu, 0.50mm obukhulu, 0.635mm obukhulu, 1.0mm obukhulu. Ngaphandle kwalokho, ukuqina okwenziwe ngokwezifiso kuyaphumelela ukunikela.
Ukukhiqizwa kokukhiqiza ukushiswa kweshadi
A: Sihlale sisekela i-substrate eyenziwe ngokwezifiso eyenziwe ngokwezifiso ngobukhulu obuhlukene, ukuklanywa nokuphathwa kwendawo.